Old indiza - Rikoooo
Ikhasi 1 kwezingama-4 Imiphumela 1 - 15 kwezingu-55
Iphakethe le-Howard 250 Trigear FSX & P3D
Izindiza ezinhle ngokubabazekayo ezikhiqizwe ekugcineni kweMpi Yesibili Yomhlaba, le phakethe ifakiwe nama-sebete amabili, ephelele i-cockpit kanye nemisindo eyenziwe ngokwezifiso. Ngibonga uMilton Shupe noWilliam Ellis ngokwenza lokhu add-on. Futhi, iyahambisana ne Prepar3D v4 kanye v5.Superb handling handling, round e ... Funda kabanzi
NguMilton Shupe noWilliam Ellis, ngeminikelo yangaphambilini eyenziwe nguTom Fiking, uScot Thomas, uKen Mitchell, kanye noMsindo nguNigel Richards. Izibalo zomshayeli nguJan Visser.
Usayizi 98 MB
Play 1 259
I-Douglas DC-3 ithuthukisiwe FSX & P3D
Lokhu kuhumusha kwe-DC-3 okudumisayo kwakhiwe kokuzenzakalelayo FSX imodeli futhi ifaka ukungafani kwe-fuselage nokubuyiswa okuvela emfuyweni oyimodeli kaJonathan kanye noJon Murchison "Awesum4Sum". Zombili lezi zinhlobo zangaphandle nezangaphakathi zinezici zokulungiswa okuhlukahlukene nokwengeziwe. Amamodeli wokulinganisa ayazama ... Funda kabanzi
Imodeli nge-ACES (iMicrosoft). Ukuguqulwa, ama-cockpit kanye nezithuthukisi zohlelo nguBjoern Kesten (izikweletu ezigcwele ku-Readme
Usayizi 65.5 MB
Play 8 556
Fokker 27 Umndeni FSX & P3D
Lona ngumndeni wakwaFokker 27 onezinhlobo zeFokker F-27 Mk200 / 500, Fairchild F-27A kanye ne-Fairchild-Hiller FH-227. Kuhlanganiswe ne-3D i-cockpit ebonakalayo (ayikho i-2D Panel), imisindo yangokwezifiso kanye nama-sixiesies ayisithupha.Le phakheji iqukethe ukuguqulwa kwendabuko kwe FSX (Prepar3D i-v4.5 iyahambelana) ye-Fokker 27 Family mod ... Funda kabanzi
Isibonelo ngoMike Stone. Ishintshwe nguTom Gibson noBernward Bockheim. Kuguqulwe ku FSX ifomathi yendabuko nguBjörn Kesten
Usayizi 135 MB
Play 8 073
I-Lockheed PV-2 i-Harpoon Fire Tanker Package FSX & P3D
Umsebenzi omuhle kaMilton Shupe nabambisene naye ekuqalisweni kwaleli Lockheed PV-2 Harpoon Fire Tanker, le phakheji ifakwe imodeli eyodwa kanye nama-liveries amabili, imisindo eyintandokazi, amajijithali okwenziwa ngabanye, i-cabin ehlelwe ngokuphelele ku-3D ne-Panel 2D ephelele. Kungenzeka ukwenza umgodi ... Funda kabanzi
NguMilton Shupe, uTom Falley, uScott Thomas, uHans Naegele, uNigel Richards, uMat Wynn. Amanani okuhamba ngeJan Visser.
Usayizi 70.6 MB
Play 6 865
Lephakheji ihlanganisa imodeli eyingqayizivele (umgibeli) kanye ne-livery eyodwa ngomdwebo womqondo, iphaneli kanye nezinga lomkhuba, imisindo yenkambiso kanye ne-livery. Sibonga kakhulu kuMilton Shupe nabambisene naye. Amadokhumenti nePhaneli zihambisana noHoward 500 Funda kabanzi
uMilton Shupe, uScott Thomas, uWilliam Ellis, noMsindisi nguNigel Richards
Usayizi 63.4 MB
Play 2 734
Noma kunjalo futhi njalo umsebenzi omuhle kaMilton Shupe kanye nabambisene naye. Le phakheji ihlanganisa izibonelo ze-5 (abagibeli nemithwalo), i-Panel kanye ne-custom gauges, imisindo yangokwezifiso, imodeli yendiza yomuntu siqu kanye nezikhangiso ze-16. Amadokhumenti agcwalisiwe.I-Howard 500 ibhizinisi lebhizinisi elikhiqizwa kuma-1960 ku-Un ... Funda kabanzi
uMilton Shupe, uScott Thomas, uJoáo Paz, uDamian Radice, uNigel Richards, uWilliam Ellis noWilly McCoy
Usayizi 106 MB
Play 4 635
U-Douglas C-117D FSX & P3D
Le phakheji ehlukile yenezela izinqubo ezintsha zokuqalisa, ukuphathwa kwe-auto-mix, uhlu lokuhlola olusebenzisanayo, ingxoxo ye-VC kanye nephaneli le- 'Monitor' ekwenzeni kabusha i-VC. Amamodeli ngokuyinhloko asekelwe ku-Jan Visser's (ithimba le-DIGITAL DAKOTA WORKS) iphakheji le-C-47. Siyabonga abalobi balo msebenzi omkhulu.Izici ezingekho ... Funda kabanzi
Amamodeli ngokuyinhloko asekelwe ku-Jan Visser's (ithimba le-DIGITAL DAKOTA WORKS) iphakheji le-C-47. Amamodeli ahlaziywe nguManfred Jahn, ukudwetshwa kukaGordon (gman) Madison noNick Cooper, ukuhlolwa kuka-Alan G. Ampolsk noRalf Scholten. Ucwaningo lwangempela lomlando lukaJohn D
Usayizi 105 MB
Play 9 755
Le phakethe ifaka amamodeli amane, ama-gauge angokwezifiso, iphaneli yangokwezifiso, imisindo yangokwezifiso, imodeli yendiza yangokwezifiso nama-chiries ayisishiyagalolunye. Ngibonga uMilton Shupe ngalokhu okuhle add-on.I-Riphabhulikhi i-XP-72 ingumbhikishi oyisisekelo we-proteptype interceptor okhuliswe njengesithuthukisi se-P-47 Thunderbolt. I-XP-72 yenzelwe ... Funda kabanzi
uMilton Shupe, uTom Falley, uNigel Richards, uScott Thomas noPilot Figure kaJan Visser
Play 3 605
Lokhu add-on inekhwalithi ephakeme, ngokungangabazeki enye ye-freeware enhle kakhulu yendiza Simulator. Imodeli ye-3D ngaphandle nangaphakathi isezingeni eliphakeme, ama-gauge ayiqiniso futhi ku-3D, ukwakheka kusezingeni eliphakeme futhi imisindo ingokoqobo kakhulu. Kubandakanya ama-chiries ayisishiyagalombili namamodeli amahlanu ... Funda kabanzi
Amamodeli, i-cockpit yangempela futhi ezwakala nge-pcmeneg, amapende ka-Manuele Villa, i-Vladimir Steffan ne-pcmeneg, izinkinobho zendiza, imininingwane kanye nokuphatha amanothi nge-FSAviator
Play 3 285
AmaHawker-Siddeley HS.748 amahle anamamodeli ayi-6 (2A, 2B, AEW, Cargo, CargoLFD, paxLFD) nama -ibindi angama-94. Lokhu add-on yadalelwa i-FS2004 yabe isiguqulwa yiRikoooo yaya kwifomethi yendabuko ye FSX futhi Prepar3d I-v4 ngemvume nokusekelwa kukaRick Piper umbhali wokuqala. Le phakethe ifaka ... Funda kabanzi
U-Rick Piper, ukuguqulwa komdabu kanye nephakheji ngu-Rikoooo
Usayizi 75.3 MB
Play 6 244
Spitfire Mk 1A native FSX futhi iyahambisana Prepar3D I-v4, imodeli enhle ene-livery eyingqayizivele, kufaka phakathi izithombe, intuthu, nemiphumela yezibhamu zomshini (cindezela i-key), imisindo yangokwezifiso, i-3D i-cockpit kanye nephaneli ye-2D, imibhalo.I-Supermarine Spitfire ingenye yabazingeli abasebenzisa kakhulu abahlali I-RAF ne ... Funda kabanzi
Usayizi 13.8 MB
Play 8 091
I-Avia 56 Series FSX & P3D
Lephakheji ihlanganisa izinhlobo eziyisikhombisa zezindiza (amasondo, izitshalo, ama-amphibians, i-skis) enezithombe ze-13, imodeli endiza kakhulu yokuhamba, imisindo engokoqobo ekhangayo neyinkimbinkimbi yama-radial, ama-panels angokwezifiso, ama-easy-read, ama-cockpits ebonakalayo angacacile, nangaphandle okuklanyelwe ngaphakathi nangaphakathi izimboni.Le indiza i ... Funda kabanzi
NguMilton Shupe, uNigel Richards, noMat Wynn, abanomnikelo owenziwa nguBill Ortis no-Oleboy ngosizo lwabalungu be-SOH.
Usayizi 69.2 MB
Play 2 631
ENyakatho Melika B-25J RAF MkII FSX & P3D
Indiza enhle yeMpi Yezwe II eyaziwa ngokuhlasela kwayo eTokyo. Lokhu add-on yakhelwe iFS2004 nguBrian Withers noRoy Chaffin wabe eseguqulwa waba ngumdabu FSX nguBluebear (esikubonga ngokudlula), umphumela: muhle add-on ngoba Prepar3D i-v4 ne FSX phakathi kwabanye. Kuhlanganiswe no-qua abayisikhombisa ... Funda kabanzi
Idizayini yangempela yendiza eyenziwe nguBrian Withers noRoy Chaffin, Guqula FSX ifomathi yendabuko ngeBluebear
Usayizi 28.9 MB
Play 6 584
Imiklamo ye-DC (uDean Crawford) isinikeza lapha i add-on yekhwalithi engenakufinyeleleka, umsebenzi wangempela wegolidesmith! Umphakathi we-simmers ubonga kakhulu. Lendiza ibilolongwe ngayo yonke imininingwane, i-cockpit ebonakalayo ingaphansi, imisindo nokwenziwa kwayo kunengqondo kakhulu. Uma uthanda iMpi Yezwe II ... Funda kabanzi
Dean Crawford - DC Designs
Play 4 460
U-Douglas A-20 Havoc FS2004
I-Douglas A-20 Havoc / DB-7 iyindiza ye-WWII yaseMelika ehambisana nezimo ezindizeni zombili zokuhlaselwa, ibhomu elikhanyayo nobusuku bebusuku. Njengesijwayelekile i-Milton Shupe isinikeza isimangalo kokubili ngokucacile nangokwemvelo.Le phakethe ye-FS2004 ihlanganisa izinhlobo ze-4 nezinhlobo ze-20, umsindo weqiniso we-Nigel Richards, umkhuba ... Funda kabanzi
Usayizi 121 MB
Play 3 139